Uma ucele omunye iforamu ikhompyutha ezihlobene ngalokho Ezivamile yakhe ukuhlobanisa elithi "windose", akunakwenzeka ukuthi ngeke utshele othile mayelana amafasitela. Cishe, iningi abasebenzisi, okwadingeka isikhathi esihle "ukudlala" nge Win 98-XP, uzokhumbula ukuthi faka. Ngeshwa, umbuzo indlela faka i-Windows, efanele futhi kuze kube namuhla, naphezu ngempela ehloniphekile nokwethenjelwa zakamuva OS lo mkhaya edume. Ukuze kungalungile ukusho ukuthi iningi lalezi zindlela izinhlobo zezinkinga kuphakama ngenxa iphutha abasebenzisi ngokwabo.
Cabanga ngendaba zakudala ufaka CD noma i-DVD drive. Njengoba kulula ukwenza lokhu nje indlela (kusukela faka Windu kusukela induku kancane more xaka ngenxa isidingo ukusebenza amanye amathuluzi ethize), lapha sizokutshela ke ukufaka kuya disc optical.
Into yokuqala okudingeka ukwenze - bashise isithombe ohlelweni disk. Khuluma mayelana nokuthi ungakwenza kanjani lokhu, ngeke senze njalo. Kuhle kokusho kuphela kuyatuseka ekulobeni disc ngesivinini aphansi kakhulu, ngoba ngaphandle kwalokho amaphutha kungenzeka, okwenza ukufakwa engenakwenzeka. Isithombe uhlelo engcono ukulanda kuphela (!) Esemthethweni, hhayi bamazwe baya nezethembiso "onjiniyela" yesifunda amaningi ezazigxishwe zonke izinhlobo udoti.
Ungakhohlwa ukuthi ne ethengisa laptops olusemthethweni ngokuvamile kukhona esisemthethweni ukufakwa ezilengayo. Njengoba faka Windu abasebenzisi laptop kunzima (ngenxa izilungiselelo nokuphathelene), abakhiqizi ngokuvamile lula inqubo ngokwakha ngodonga ezifihliwe ukubuyisela izithombe. Kafushane, uma i-laptop sakho simukile ohlelweni, uye kuwebhusayithi lonjiniyela nokufunda manuals khona: kungenzeka ukuthi noma yimuphi ngemoto wena futhi ayidingi.
Yingakho ukukhuluma kanjani faka Windu ku-PC. Ngakho, ukuze ngishise isithombe CD, ufaka bayifaka ikhompyutha yakho bese uthumela ku kabusha. Qaphela ukuthi kubalulekile ukuze ususe kusukela ohlelweni ukushayela lonke ulwazi kubalulekile kuwe, ngoba ngaleso sikhathi kuyoba kungenakwenzeka ukuba siphindele esimweni esikahle. Njengoba walinda kwaze kwaba yilapho logo BIOS livela, esetshenziselwa kukhompyutha yakho, cindezela ikhi DEL on the ikhibhodi. Uma yonke into ihamba kahle, ungena izilungiselelo BIOS.
Ngaphambi faka i-Windows, uzodinga Boot kusuka CD. Njengoba izinguqulo BIOS eziningi, okuwukuphela kwendlela of ukulungiswa okunjalo abakwazi ukuhola. Nalapha futhi kuzodingeka ukukhombisa ukuzimela futhi afunde okuthile ngako ku ingxoxo izinkundla noma website ye wayo. Londoloza izilungiselelo futhi , kabusha computer.
Walinda kwaze kwaba yilapho sekupheleni thwebula uhlelo ifayela edingekayo, uzobona iwindi Ukufakwa. Ngo inqubo yamanje isebenza ngokugcwele ihluzo kwimodi. Uzodinga ukusetha ulimi lwesistimu, setha isikhathi, igama lomsebenzisi nephasiwedi. Njengomthetho, e lokufaka kuyodingeka ongakhetha eziningana, kuhlanganise Kubasebenzisi bokuqala ngqa kungcono ukhethe "Ukusetha kabusha ephelele" lapho kwimodi okuzenzakalelayo, le ndlela ukufometha drive uhlelo futhi zenze neminye imisebenzi edingekayo.
Sethemba thina lucidly wachaza indlela faka i-Windows, futhi unemibuzo enjengalena Ngeke uze uphazanyiswe esikhathini esizayo.
Likuphi yokunamathisela yakho kwi "Android" (yefoni tablet)
Indlela ukulanda isicelo ku Android? Step by step Umhlahlandlela
Indlela ukubuyekeza "Igama", uhlu lokuqukethwe bese okuqukethwe kulo
Izimfihlo nemikarisomraro ye yamandulo. emigodini nezimfumbe impucuko yasendulo
Ihhavini yegesi yamakamelo ahamba nge-cylinder: ukubuyekezwa, izithombe
USt. Natalia weNicomedia: Ukuphila